Saadaasha Roob di’idda Soomaaliya ee Deyrta 2017
Roobabka deyrtu inta badan waa ka gaaban yihiin kana tiro yar yihiin kuwa Guga. Hase ahaatee, waxay waxtar u yihiin taageeridda hawlaha waxsoosarka beeraha, daaqa iyo sare kaca biyo u helidda isticmaallada kala duwan. Guud ahaan xilligu wuxuu bilowdaa daba yaaqada Sabteembar wuxuuna dhammaadaa Nofeembar.Si kasta oo ay ahaataba, waa iska bedbedelaa meel ka meel dhammaan dalka iyadoo ay qaybaha Waqooyi roobabka helaan waqti aad uga horreeya qaybaha koofureed. Shirka wacaalka Saadaasha Cimilada Geeska Afrikada Weyn wuxuu xaqiijiyey inuu hoos u dhac ku yimid fursadda lagula kulmayo dacdo El Nino ah inta lagu jiro bilaha Sebteembar ilaa Diseembar. Saadaasha roob di’iddu waxay muujineysa in xilliga Deyrta ee Soomaaliya laga filanayo uu noqonayo mid caadi ah (40% qiyaastii roobabku waa caadi) iyadoo loo badinyo inay suurtogal tahay in 35% ay roobabku caadiga ka hooseyaan badi qaybaha dalka. Tan waxaa sidoo kale ka mid ah qaybo ka tirsan buuraleyda sare ee Itoobiya oo biyo ku biiriya webiyada Juba iyo Shabeelle ee gudaha Soomaaliya. Waxaa intaa dheer, Gobollo xeebeedka Jubada Hoose iyo Shabeellaha Hoose ayaa waxaa la filayaa in ay la kulmaan roobab caadi ah (40% qiyaastii roobab caadi ah) oo laga yaabo in 35% ay noqdaan wax korreeya roobabka caadiga. Saadaashani waa saadal la isku afgartay oo loogu talagalay dhageysteyaasha gobolka oo wax ka qabta roobabka wadar ahaan marka isugeeyo muddada saddexda bilood oo ka bilaabmaya Oktoobar ilaa Diseembar 2017. Hase yeeshee, SWALIM iyo la-hawlgaleyaasha kale ee farsameed waxay sii wadi doonaa waafajinta saadaashaan muddooyinka gaagaaban ee soo socda oo waa ay idin lawadaagi doona iyagoo ku soo gudbin doona jariidadaha joogtada ah inta xilli roobaadku uu socdo. Marka la eego xaaladaha jira iyo saadaasha roob di’idda, waxaa la yaabaa in dhibaatooyin la xiriira biyo yaraan ay ka sii socdaan gaar ahaan qaybaha Waqooyi ee dalka halkaasoo saddexdii xilli roobaad ee hore ay ahaayeen kuwo ka hooseeya heerka caadiga ah. Waxaa sidoo kale jira suurtogal ahaansha qulqulatooyin u dhexeeya bani’aadan-xoolo oo isaga hor imaanaya ilaha biyaha xaddidan oo meelahaas ka jira. Kormeer si dhow loogula socdo xaaladda iyo tallaabooyin wax lagu bedelayo ayaa lagama maarmaan u ah sidii si waxkuool ah wax looga qabto xaaladda. Si kastaba ha ahaatee, meesha lagama saari daadadka butaaca oo ka dhaca iyo sidoo kale khadka webiga fataahaya oo sababtu tahay gebiyada webiga oo daciif iyo daamanka webiga oo loo jebiyo iyadoo looga dan leeyahay in waraab loo adeegsado. Waxaa laga filayaa in biyo ka helitaanku ka kordho meelaha roobabku ay caadi ka yihiin. Xaaladaha noocaas ah, waa in bulshooyinku ay ka faa’ideystaan roobabka oo hoor-qabsadaan marka ay da’ayaan si ay mustaqbalka u isticmaalaan, iyagoo adeegsanaya farsamooyin fudud. Dhanka kale, hadii ay jiraan roobab hoos u dhacsan waxaa laga yaabaa in dib-u-buuxsamidda meelaha ilaha biyaha dhusha sare ah ay yaraato sidaas awgeed bulshooyinku waa inay khayraadyada biyaha la haysto u isticmaalaan si beekhamin/tashiil leh.
Somalia Rainfall Forecast 11-11-2016
Waxaa guud ahaan Soomaalia la filayaa roob yaraan saddexda maalmood ee soo socota, marka laga reebo meelaha xeebaha koonfureed kuwaas oo laga yaabo inay helaan roobab fudud. Qaybta biyo-qabatinka sare ee Webiyada Juba iyo Shabeelle ee xagga buuraleyda saree e Itoobiya waxay iyaduna sidoo kale ahaan doontaa qalayl isla muddada iyada ah.
Saadaasha Roob da’a Soomaaliya 28-10-2016
Roobab fudud ayaa laga rajeynayaa in laga helo gudaha qaybo ka tirsan gobollada Sanaag iyo Togdheer oo ka tirsan qaybaha waqooyi ee Soomaaliland iyo dhawr meelood oo ka tirsan gobollada koonfureed ee xuduudka la leh Itoobiya. Buuraleyda sare ee Itoobiya oo roobabkeedu door xoogan ka qaataan qulqulka Webiyada Juba iyo Shabeelle ee gudaha Soomaaliaya ayaa iyagana la filayaa inay helaan roobab fudud iyo kuwo dhexdhexaad ah inta lagu jiro muddada la sadaaliyey. Dalka inta soo hartay waxay heli doonta roob yar ama roob la’aan bay noqon isla muddada la xusay.
Saadaasha Roob da’a Soomaaliya 27-10-2016
Saddexda maalmood ee soo socota waxaa qaybo badan oo ka tirsan Soomaaliya ka jiri doona arrin roob yaraan marka laga reebo gobollada Puntland halkaas oo laga rajeynaayo roobab dhexdhexaad ah maalmaha dambe ee muddada la saadaaliyey. Waxaa kale oo saddexda maalmood ee soo fool leh laga saadaalinayaa xagga buuraleyda sare ee Itoobiya roobab dhexdhexaad ah.
Muuqaalka roobda’a Soomaaliya ee Deyrta 2016
Sida dhawaan lagu sheegay saadaal cimilo xilliyeed ku saabsan Geeska Afrikada Weyn ee soo saartay xarunta IGAD ee Saadaasha Cimilada iyo Xarunta dabaqaadda (ICPAC) ee taal gudaha Kampala, Uganda, roobabka Deyrta sanadka 2016 ee gudaha Soomaaliya ayaa waxaa la filayaa inay noqdaan kuwa dhexeeya wax ka hooseeya caadi ilaa caadi –iyadoo qiyaasta la filayo ay tahay 40% roobab ka hooseeya caadi iyo qiyaastii 35% roobab ku dhaw caadi gudaha dalka oo idil. Biyo-qabatinka sare ee webiyada Juba iyo Shabeelle gudaha Itoobiya ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in ay ka jirisayso hoos udhac roobab inta lagu guda jiro xilliga Deyrta. Fadlan eeg lifaaqqa si aad u aragto tafaasiil dheeraad ah. Fadlan ogow in arrintani tahay saadaal la isla qaatay oo loogu talagaly goobjoogayaasha gobolka taasoo ka waaramaysa isugenta wadarta roobda’a, sanadka 2016, ee muddada saddexda bilood oo ka soo bilowda Oktoobar ilaa Disheembar. SWALIM iyo la-hawlwadaagta farsameed ee kale waxay joogto u cusuboonaysiin doonaan wararka saadaashan oo waxay kuurgali doonaan muddooyin waqtiga gaaban roobabku sida ay noqdaan xilliga Deyrta oo dhan waxaa ayna indin kula soo socodsiin doonaan wargeysyo caadi ah oo ay idiin soo gudbin doonaan.
Xaaladda Jajabka-Gebiyada Webi Juba iyo Shabeelle – Sabteembar2016
Saadaasha roob-da’a Deryta 2016 (Oktoobar ilaa Nofeembar) waxay tilmaamaysa mid ah xaalad roobab caadi-u dhaw iyo caadi- ka hooseeya gudaha dooxooyinkaWebi Juba iyo Shabeelle. Hase ahaate, waxaa laga yaabaa in weli ay fatahaad ka dhacdo jiidda labada webi, gaar ahaan meelaha leh gebiyo webi oo furan/gebiyo webi oo tag daran, marka ay dhacdo qulqul webi oo kordhay. SWALIM waxay casryeysay xaaladda jajabka-gebiyada webiga iyadoo khariidadeysay oo isticmaashay Masawir dayax-gacmeed aad iyo aad u bayaansan iyo Muuqal joog tirsiyeed (Digital Elevation Model (DEM)); iyo sidoo kale indha-indheyn goobta gegida meeshii ay suurtogal ah. Saddex nooc oo jajab ayaa la aqoonsaday, oo lagu kala magacaabay: furan, suurogal, iyo xiran. Jajabka furan waa kuwa weli furan inta lagu guda jiro bisha Sabteemabar 2016. Jajabka suurogal waxay ka dhigan tahay meelo gebiyada webigu taag daran yihiin ama la kulmeen jajab waqti dhaw oo la soo dhaafay iyo meel wax yar ama hawlqabad aan laga samaynin. Tan waxaa ka mid ah jajab la xirxiray iyadoo la isticmaalayo kiishash camuud ah. Jajabyada la xirxiray waa kuwo markii hore furnaa balse ka dib la xirxiray iyadoo la isticmaalayo qalab makiinado culus ah, taasoo ka hortagtay fatahaad kale oo muddo gaaban iyo mid dheer. Khariidadaha ku lifaaqan waxay muujinayaan jajabyada furan iyo suurogal ee jiidda labada webi. Marka la soo kobo, toddobo (7) meel oo ka furan jiidda Shabeelle iyo 63 jiidda Juba ayaa la aqoonsaday.Waxaa kale oo la aqoonsaday dhawr meelo kale oo in ay jajabaan suurogal tahay oo u baahan in la xoojiyo. Hase ahaatee, waxaa mudan in la eego in habraacu uu si culus ugu tiirsan yahay masawirro dayax-gacmeed oo ay xadadan tahay ka soo xaqiijinta goobta dhulka. Mararka qaar gebi-jajabyada furan meesha waa laga saari karaa haddii masawirrada dayax-gacmeedku aysan bayaansanayn (tusaale, ded daruur culus) amase aan sinaba loo heli karin. Kkariidadaha xaaladda gebi-jajabyada webiga oo macluumaad faahfaahsan leh, ayaa la soosaaray oo heer ballaaaran ah iyo nuqullo waraaqadag oo laga heli karaa xaafiisyada SWALIM. Macluumaadkaan waa sidoo kale laga heli karaa Habka macluumaadka SWALIM ee Halista Fatahaadda iyo Maareynta Jawaabta (http://systems.faoso.net/frrims/rivers/riverbreakages).
Belet Weyne District Reported Floods observation and Sentinel-2 image analysis (25 May 2016)
This dataset was digitized directly from Sentinel-2 imagery of 25th May 2016 to show the areal extent of Belet Weyne flooding. Sentinel-2 image resolution of 10m was downloaded free of charge from European Space Agency (ESA)